दण्डहिनता कहिले सम्म? - भाग ३:
By सपनासंसार October 20, 2009
समय आफ्नै बेगमा दौडी रहेको थियो। दाईहरुको केही अत्तोपत्तो थिएन। आश नै मारौ भने पनि लाश नै देखेको छैन,कसरी काजकृया गर्ने। यता फरी आमा बुवा सुनिताको भबिस्य प्रती चिन्तित हुनुहुन्थियो। विवाह गर्ने उमेर पुगिसकेकी छोरी, त्यही माथि पत्रकार, भनेजस्तो केटा पाउन गाह्रो हुन्छ कि भन्नुहुन्थियो आमा। उस्ले पनि "जब सम्म दाईहरु अत्तोपत्तो लाग्दैन तब सम्मा म विवाह गर्दिन" भन्दिएकी थिइ। झन दुखी हुनु भएको थियो उँहाहरु।
अब त उस्को जीवनको लक्ष्य नै दाईहरुको खोजी गर्ने भई सकेको छ। प्रशासन र आयोगहरुका राजनैतीक ओठे प्रतिबद्धता अब उस्लाई विश्वाश लाग्न छाडी सकेका छन। आफ्ना मागहरु पुरा गर्न, प्रशासन र आयोगहरुलाई घच्चघचाउन, देशबाट दण्डहिनताको अन्त्य गर्न अब यस्ता पीडित परिवारहरुको एउटा समुह नै बनाएर आन्दोलनमा उत्रिने बिचार गरेकी छ उस्ले। सबै तिरबाट यस्ता साथीभाईहरुको समुह बनाउन खोज्दै थिइ तर हामी कहाँ खटेर काम गर्ने भन्दा पनि अरुलाई पनि काम गर्न नदिने प्रवृत्तिले नै उस्लाई कती चोटि पछारी रहेको थियो। तर हिम्मत हारिन उस्ले। "थोपा थोपा पानीले समुन्द्र बन्दछ" भने जस्तै अहिले बेपत्ता व्यक्तिको तर्फबाट पिडित परिवारका सदस्यहरु राष्ट्रिय स्तरबाट नै आएका छन। सबै जनाको एउटै बोली थियो- हाम्रो बेपत्ता व्यक्तिहरुको कि त लाश चहियो कि त सास। दण्डहिनताको अन्त्य हुनु पर्छ। देशका ठुलो ओहदामा बसेका
ब्यक्तिहरु हरेक छलफलमा सकारत्मक जवाफ दिन्छन तर कार्यवायन चाँही कहिलै गर्दैन। त्यसै हुनाले राज्य आँफैले पनि दण्डहिनतालाई प्रत्सोहन गरिरहेको आभस भइरहेको छ सबै जनताहरुलाई। आखिर किन त ? यस्तो अवस्थामा पीडित पक्षहरु आक्रोशित हुनु स्वाभाबिक नै हो। नियम भित्र रहेर आफ्नो सार्बभौमिकता अभ्यास गर्न पाउनु हरेक जनताको अधिकार हो । त्यो अधिकार राज्यले जनताहरुलाई दिन नै खोज्दैन, किन? के जनताको सुरक्षाको लागि हाम्रो सरकारले अपराध अनुसार कानुन तर्जुमा गर्न सक्दिन्न, आखिर किन ?
यो ५ बर्षमा कती चाडबाड आए गए, न त ति चाडबाडहरुले कुनै हर्स उल्लसको रौनकता नै भित्रायो उस्को घरमा न त कुनै उमङ्ग नै। यसै आउथें, जन्थें ति चाडहरु। तर हरेक सालको तिहार आउँदा त सुनिताको मन साह्रै नै रुन्थियो। यसपाली पनि त्यो आँशुको भेल खहरे खोला झै बर्सिने पक्क थियो। अफिस तिर जाने तर्खर गर्दै थिइ आज बिहान उ मोबाइल को घन्टी बज्यो। मोबाइल हेरी उस्ले तर नाम नै आएको थिएन। हत्तपत्त उठाइ। उताको कुरा सुनेर उसको बोली नै फुटेन। उस्ले यो कुरा त सोचेकी पनि थिइन की आफ्नो चाहना अनुसार, आफ्नो रहर पुरा गर्ने नाममा उस्ले उस्कै दाईहरुको ज्यान खतरामा मोलिदिएकी रहिछ। उ पत्रकार भएको कारण नै उस्का दाईहरु उस्को सामुबाट खोसिएका रहेछन, त्यतिबेला भूमिगत भएका दलबाट। अझ फोनमा आवाज आहिरहेको थियो कि अझ उ बेपत्ता व्यत्तिहरुको खोजीमा सकृया रुपमा लागि परेमा वा त कुनै त्यस्ता सम्बन्धी लेख रचना प्रकाशित गरेमा उस्लाई पनि यस संसार बाट बिदा गरिदिने धम्की दिएर फोन रखिदियो। आज भाईटिकाको दिन नै उस्ले यो के सुन्नु पर्योद। उ जो जहिले पनि आफ्नो दाजुभाईको सु-स्वास्थ अनी दिर्गायुको कामना गर्छे, उसैले नै गर्दा उस्का दाईहरु पीडित हुनु परेको हो त? यही कुराले मन गरुङ्गो पार्दै आजको समाचार वचन गरेकी थिइ उस्ले अनी कसैसँग पनि केही नबोली सरासर आफ्नो अफिस कोठा तिर लगेकी थिइ। सुनिताको मन छट्पटी रहेको छ। के गर्दा बेश होला, के नगर्दा ठीक होला छुटाउन सकेकी छैन उस्ले। आफ्नो बाँच्न पाउने अधिकार पनि उस्ले अरुको ईशारामा प्रयोग भएको महसुस गर्दै छे।
के यही नै हो त मानब अधिकारको सुनिश्चितता? दाईहरुको बिछोडबाट बुवा आमा मरेतुल्य हुनुहुन्छ नै, यदी उस्लाई पनि केही भयो भने उँहाहरुले के गर्नुहुन्छ। ५ बर्ष अगाडिको द्रोन्द्रले अनेक थरीका पिडाहरु दिएका छन उँहाहरुलाई, मानसिक स्थिती झन कम्जोर भइरहेको छ। यस्तो परिस्थितीमा अब फरी अर्को एउटा उमा सिंह पनि थपिएमा के हुन्छ होला यो देशको गती? केहि गर्छु भन्ने सुनिता जस्तालाई गर्ने बातबरण छैन, केहि गर्न नसक्नेलाई उचित बाटो देखाउनु भन्दा ति नै जनताहरुबाट समाजमा अलिकति टाठाबाठा भै टोपलेका व्यक्तिहरुले समाजमा उदण्ड मच्याउने मनसायले जातिय, धार्मिक अनी यस्तै यस्तै आपराधिक समुहमा हुलेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गरि आफु भव्य जीवन जिइरहेक छन। सभ्यताले भन्दा किन बडी प्राथमिकता पाइरहेको छ भव्यताले आजभोलि? "खुकुरीको चोट अचानोलाई मात्र थाहा हुन्छ" भने जस्तै जे जस्तो परिस्थिती आए पनी आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर दण्डहिनता जस्तो जघन्य प्रकृतिका अपराधीलाई नयाँ बन्ने संविधानमा मृत्युदण्डको प्रावधान हुनुपर्छ भने नारा अगाडि सर्ने अठोट लिइ उस्ले। देशका ठुलाबडाहरुले कानुनको शासनलाई नमाने सम्म, देश र जनता भन्दा आफु ठुलो भएको घमण्ड राजनितिक पार्टिहरुले ब्याबहार मै नत्यागे सम्म र कुरामा मात्रै सहमतिको राजनिति गर्ने प्रबृतिको अन्त्य नभएसम्म राष्ट्र र जनता झन झन दलदल भित्र फस्दै जाने निश्चित छ। त्यस्तै गन्तब्यहिन बाटो हिडेको हाम्रो सरकारले मानवीय कल्याणका लागि उठेका सुनिता जस्ताका पाइलाहरु साँच्चिकै कहिले देखी प्रशंसा गरी, देशमा दण्डहिनता अन्त्य गर्न निश्पक्ष रुपमा त्यस्ता अपराधहरुको अनुसन्धान गर्ने? त्यसैले आउनुहोश सरकारबाट केही आशा नराखी फरी अर्को पत्रकारको हत्य हुन नदिन, दण्डहिनताको अन्त्य गर्न सबै जना जागौ, अबेर भैसक्यो !